केकी को ईन्ट्रीले (नाई नभन्नु ५) लाई फाईदा गर्ला त ? - Nepali Cinema News
Home > Nepali > केकी को ईन्ट्रीले (नाई नभन्नु ५) लाई फाईदा गर्ला त ?
केकी को ईन्ट्रीले (नाई नभन्नु ५) लाई फाईदा गर्ला त ?
सुरुवातको चलचित्र माई बेष्ट फ्रेन्ड देखी हुर्रे सम्म आईपुग्दा एक पछि अर्को फ्लप फिल्म दिईरहेकी कुसल अभिनेत्री केकी अधिकारीको (नाई न भन्नु ल ५ )मा ईन्ट्री भएको समाचारले आज नेपाली संचार माध्यमका पेजहरु भरीएका छन् । यो चलचित्रमा अधिकारीको ईन्ट्री हुनु भन्दा उनको ईन्ट्रीले फिल्मलाई सफल बनाउन कति मद्दत गर्छ ? त्यो चाँई ठुलो कुरा हुन सक्छ । उनि अभिनयमा राम्रो क्षमता हुँदा हुँदै पनि पछिल्लो समय अरुको फिल्ममा काम पाउन छोडेपछि आफै चलचित्र निर्माणमा होमीएकी छिन् । उनले निर्माण गरेको चलचित्र (कोहलपुर एक्सप्रेस) प्रर्दशनको तयारीमा रहेको छ । केकीलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अनलक्की अभिनेत्री पनि भन्ने गरीन्छ । किन कि उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरु गुणात्मक हिसाबले राम्रा हुँदा हुँदै पनि ब्यावसायीक हिसाबमा असफल भएका छन् ।
चार ओटै संस्करण सम्म राम्रो सफलता पाएको यो चलचित्रको पाँचौं संस्करण कति सफल अथावा कति असफल हुने हो भन्ने कुरा अहिले नै किटानका साथ भन्न सक्ने अवस्था नरहेता पनि केही कुराहरुलाई आधार मानेर अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था भने रहेको छ ।
पछिल्लो समय पारिवारीक प्रेमकथा, रोनाधोना भन्दा पनि दर्शकहरुको चाह हाँस्य बिधाका चलचित्रहरु प्रति बढेको देखीन्छ, भने नाई न भन्नु ल को चौथो सिरिज प्रर्दशन भएको पनि लामो समय भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नाई न भन्नु ल धारका चलचित्रलाई बिर्षियर दर्शकहरुले छक्का पञ्जा धारका चलचित्रलाई सम्झीरहेको पाईएको छ । यस्तो अवस्थामा यो चलचित्रमा केकीको ईन्ट्रीले कुनै अर्थ नराख्ने मुल्यांकन गरीएको छ ।